Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 39
Ahoana no hiarovan-tena amin'ny lainga na fanendrikendrehan'ny hafa?
Amin'ny maha-marina ny eritreritra, ny marina amin'ny teny, ary amin'ny atao. Raha misy olona tsy mieritreritra ny lainga ary milaza ny marina amin'ny teny, ny lainga na ny fanendrikendrehana dia tsy maharesy azy. Raha jerena ny tsy fitoviana sy ny fanendrikendrehana tsy manjaka eto amin'izao tontolo izao, dia tsy hita taratra amin'ny zava-misy izany fanambarana izany. Marina izany. Tsy misy olona te hanendrikendrika; Tsy misy olona te handainga momba izany; fa ny ankamaroan'ny olona dia mandainga sy manendrikendrika ny hafa. Angamba ny lainga dia kely fotsiny, "lainga fotsy"; Angamba ny fanendrikendrehana dia natao fotsiny amin'ny fomba fifosana, hanao resaka. Na izany aza, ny lainga dia lainga, na izany aza dia mety miloko na antsoina izy. Ny zava-misy dia sarotra ny mahita olona izay misaina tsara, miteny marina ary manao ny rariny. Mety hanaiky io fanambaràna io amin'ny ankapobeny ny olon-kafa, saingy mety handà izany raha toa ka ampiharina aminy. Ny fandàvana azy, na izany aza, dia manaporofo fa marina amin'ny fanambarany ny fanambarana, ary izy no iharan'izany. Ny fahazarana manerana izao tontolo izao dia miantso lainga amin'ny lainga ary manendrikendrika ny fanendrikendrehana amin'ny ankapobeny, fa tsy mampihena ny fandraisanay anjara amin'ny famatsiana, ny antony ary ny fitehirizana be loatra sy ny tahan'ny entam-barotra amin'ny fivoahana mavitrika, ary miteraka izay tsy maintsy atao amin'ny fanomezana aoka ho azo tsapain-tanana na maratra amin'ny lainga sy fanendrikendrehana.
Ny lainga dia ao anatin'ny tontolo fitondran-tena izay mamono olona eo amin'ny tontolon'ny zavaboary. Izay mamono olona dia hamono ny vatana. Izay mandainga iray hafa dia manimba na manandrana manimba ny toetran'ilay olona hafa. Raha tsy mahita ny fidirana amin'ny fitaovam-piadiana amin'ny vatany ny mpamono olona, ​​dia tsy hahomby amin'ny fikasany hamono azy izy, ary azo inoana fa rehefa tratra izy dia hijaly noho ny asany izy. Mba hisorohana ny fidirana ao amin'ny vatany amin'ny fitaovam-piadiana, dia tsy maintsy niaro ny tenany tamin'ny akanjo fiarovan-tratra na zavatra iray izay manohitra ny fanafihana ilay voina voatokana. Ilay mpamono any amin'ny tontolo fitondrantena dia mampiasa lainga, lainga, fanendrikendrehana, toy ny fitaovam-piadiany. Miaraka amin'izy ireo izy dia manafika ny toetran'ny namonoana azy. Mba hiarovana ny tenany amin'ny fitaovam-piadiana, ny tompon'andraikitra voatendry dia tokony hanana fiadiana momba azy. Ny fahamendrehana amin'ny eritreritra, ny fahamarinam-pitenenana, ary ny rariny amin'ny asany, dia hanamboatra fiadiana mahomby ho an'ny fanafihana. Tsy hita izany fiadiana izany, fa tsy lainga na fanendrikendrehana hita maso, na tsy hita maso. Na dia tsy hita aza, dia zava-misy marina kokoa noho ireo dia ny pistola, ny antsy, na ny fiadiana vy. Ny lainga na ny fanendrikendrehana dia tsy misy fiantraikany amin'ny toetran'ny olona iray izay arovan'ny fahamarinan-toetra sy ny fahamarinana, satria ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toetra dia hatsarana maharitra; lainga sy fanendrikendrehana no fanoherany, ary vices izay tsy lavitr'ezaka. Ny lainga dia tsy haharesy ny marina. Ny mpanendrikendrika dia tsy afaka handresy ny fanaovana ny marina. Fa raha tokony ho marina amin'ny heviny ny olona iray dia mieritreritra lainga sy miteny lainga, ny fomba fisainany sy ny fiteniny dia mahatonga ny toetrany ho malemy sy ratsy amin'ny lainga tsara na ny fanendrikendrehana azy. Raha, na izany aza, ny toetrany dia miaro amin'ny fiarovan-tena avy amin'ny fahatsorany amin'ny fisainana sy ny fahamarinam-pitenenana, avy eo ny fitaovam-piadiana izay mikendry azy dia hamaly ilay nitarika azy ireo ary iza no hijaly noho ny fihetsika nataony. Izany no lalàna amin'ny tontolo ara-môraly. Izay manimba ny toetran'ny hafa amin'ny lainga sy ny fanendrikendrehana dia hijaly noho ny fahadisoan'ny hafa, na dia mety henjana aza ny sazy. Tsara kokoa ny fikasana hamono olona iray amin'ny hafa ka hanala azy indray avy eo ary avy amin'ny fiarovana ny fahamendrehana sy ny fahamarinan'ny tanjona napetrak'izy ireo, satria mety ho hita sy ho hitany ny zava-poana amin'ny eritreritra sy ny fihetsika diso, ary Ny fianarana aloha dia tsy mandainga fa tsy hanao ratsy satria tsy afaka manao ny ratsy izy raha tsy ratra ny tenany. Rehefa fantany fa tsy tokony hanao ratsy izy raha tsy miala amin'ny sazy ratsy, dia hianatra hanao ny tsara izy satria tsara sy tsara.
Ny "laingan'ny fotsy" sy ny fanendrikendrehana tsy misy dikany dia tsy ireo zavatra tsy mampidi-doza izay heverin'izy ireo ho tsy mahita maso. Izy ireo no voan'ny famonoana olona sy heloka hafa, na dia betsaka aza ny fotoana mety hampiditra ny famolahana ny voa sy ny vokatra vokariny.
Raha misy olona milaza lainga izay tsy hita, dia azo antoka fa hilaza amin'ny iray hafa izy, ary ny iray hafa, mandra-pahitany azy; ary tonga mpandainga mafy izy, voamarina amin'ny fahazarana. Rehefa mandainga izy dia milaza lainga iray hafa hanafina ny voalohany, ary ny ampahatelony dia hanafina ny roa, sy ny sisa, mandra-pifanohitra ny laingany ary hijoro ho vavolombelona matanjaha manohitra azy. Ny fahombiazany tamin'ny voalohany dia ny nampitombo ny isan'ireo laingany, ny hampahory kokoa sy ny fadiranovana kokoa raha toa ka voantso hiampanga ireo zanany ireo ny heviny. Ny olona miaro ny tenany amin'ny fahamarinan-toetra, ny fahamarinana, ny rariny, amin'ny fisainany sy ny lahateniny ary ny asany, dia tsy hiaro ny tenany amin'ny fanafintohinana sy fanendrikendrehana; Izy dia hampianatra ny fomba tsy hanafika azy ireo izay hanafika azy sy ny fiarovany ny tenany amin'ny fananana fiadiana tsy hita maso izay tsy hita maso. Izy dia tena mpanan-karena marina noho ny tanjaka ara-môraly izay namporisihana ny hafa hivoatra. Izy no ho mpitondra fanovàna marina, amin'ny fametrahana fahamarinan-toetra, fahamarinam-po sy fahamarinana amin'ny hevitra sy ny teny. Noho izany amin'ny famonoana heloka bevava dia hatsahatra ny trano fanitsiana ary hofoanana ny fonja, ary amin'ny sain-kevitra dia ho sambatra ny olona ary hahatsapa ny fahafahana.